लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? पहिला हेरौं, कम्पनी विश्लेषण :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ ? पहिला हेरौं, कम्पनी विश्लेषण
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । २०७५ चैत ४ गते सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित भएको हो ।
कम्पनीले चालू आवको ९ महीनामा रू. १० करोड ७१ लाख नाफा कमाएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ७ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सो अवधिमा कम्पनीले रू. ९ करोड ९८ लाख नाफा कमाएको थियो ।
कम्पनीले चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा रू. १८ करोड ८० लाख आम्दानी गरेकाले नाफामा वृद्धि भएको हो । मंगलवार भएको शेयर कारोबारमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा ९ हजार ५ सय ८० कित्ता शेयर खरीद गर्ने र २ हजार १ सय ४७ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो । मंगलवार कम्पनीको शेयरमूल्य १५ अंक बढेर रू. १ हजार ८ सय ८५ पुगेको छ ।
कम्पनीको ६० दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ओपनिङ कालो मारुबोजु आकृति बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य आगामी दिनमा घट्ने संकेत गर्छ । आरएसआई ओभरसोल्ड जोन ८० दशमलव ७० विन्दुमा छ । यसले शेयर कारोबार बढेको देखाउँछ ।
कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन ९ दशमलव ७९ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा जोखिम कम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य १४ दिने औसत मूल्यरेखा र २६ दिने औसत मूल्यरेखाभन्दा माथि छ । मंगलवारको शेयरमूल्य रू. १ हजार ८ सय ८५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. १ हजार ८ सय ९० मा प्रतिरोध पाउने र मूल्य सस्तिएमा रू. १ हजार ६ सय ९ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।